Jekiseni chikamu Vatengesi uye fekitori - China Jekiseni Chikamu Chikamu Vagadziri
Iyo inoraswa hypodermic jekiseni tsono inoumbwa nesimbi inobata, tsono chubhu uye ruoko rwekudzivirira. Zvishandiso zvinoshandiswa zvinosangana nezvinodiwa zvekurapa uye zvinodzivirirwa neethylene oxide. Ichi chigadzirwa iseptic uye isina pyrogen. inokodzera intradermal, subcutaneous, mhasuru, jekiseni retsinga, kana kuburitsa mushonga wemvura wekushandisa.
Model maratidziro: Kubva 0.45mm kusvika 1.2 mm
Pneumatic sirinji isina syringe
Iyo jekiseni dhizaini inogadziriswa neyakajeka tambo, uye iyo yekukanganisa kwedosi iri nani pane iya yesirinji inoenderera.
Tsono jekiseni hurongwa
Injection Jekiseni risingarwadzi kubvisa kushushikana kwepfungwa kwevarwere;
◆ Subcutaneous diffusion tekinoroji yekuvandudza mwero wekutora zvinodhaka;
Injection Jekiseni-isina tsono kudzivirira njodzi tsvimbo yekukuvara kwevashandi vekurapa;
◆ Dzivirira nharaunda uye gadzirisa dambudziko rekurapa marara marara echinyakare majekiseni michina.
Disposable drug-dissolving syringe zvinoshandiswa zvakanyanya zvigadzirwa kumba nekune dzimwe nyika. Mune basa chairo rekiriniki, vashandi vekurapa vanofanirwa kushandisa mamwe majekiseni akakura uye tsono dzesirin'i dzakakura kuti vape mvura yemishonga. Iwo anoraswa aseptic solvents anogadzirwa nekambani yedu Medical syringe ave achishandiswa zvakanyanya mukiriniki, uye magariro uye ehupfumi mabhenefiti akakosha. Iyo siringi-yekupedza sirinji inodikanwa kuti isave isina chepfu uye isina chena, saka inogadzirwa uye yakarongedzwa mumusangano we100,000-chikamu. Chigadzirwa chacho chine sirinji, mushonga unoparadza jekiseni retsono, uye chivharo chekudzivirira. Iyo jekiseni jekiseni uye tsvimbo yepakati inogadzirwa neepolypropylene, uye iyo pisitoni inogadzirwa neakasikwa rabha. Ichi chigadzirwa chakakodzera kupomba uye kubaya jekiseni remushonga kana uchipera mushonga. Hazvina kukodzera munhu intradermal, subcutaneous uye intramuscular jekiseni.
Iyo insulini sirinji yakakamurwa kuita yezita rinokwana neinodoma chinzvimbo: 0.5mL, 1mL. Injector tsono dze insulin majekiseni dzinowanikwa mu30G, 29G.
Iyo insulini sirinji inoenderana nekinetic musimboti, uchishandisa kupindira kwakakodzera kwetembere tsvimbo uye ruoko rwekunze (pamwe nepiston), nekutsveta uye / kana kusundidzira simba rinogadzirwa nechinyorwa chiito, pakiriniki chishuwo chemushonga wemvura uye / kana jekiseni yemishonga yemvura, kunyanya Yekurapa kiriniki (murwere subcutaneous, intravenous, intramuscular jekiseni), hutano uye denda kudzivirira, kubaiwa nhomba, nezvimwe.
Iyo insulin sirinji chigadzirwa chisina chena icho chinoitirwa kushandiswa kamwe chete uye hachina kuchena kwemakore mashanu. Iyo insulini sirinji uye murwere vanobata zvisingaite, uye nguva yekushandisa iri mukati memaminitsi makumi matanhatu, inova yekubata kwenguva pfupi.
Sirinji yeiyo yakatemwa dziviriro yedosi
Basa rekuzviparadza rinozotanga otomatiki mushure mejekiseni, zvichinyatso kudzivirira kushandiswa kwechipiri.
Iyo yakasarudzika dhizaini dhizaini inogonesa iyo conical chinongedzo kutyaira iyo injector gungano retsono kuti vadzokere zvachose mumuhara, zvichinyatso kudzivirira njodzi yetsono tsvimbo yevashandi vekurapa.
Inodzoserwa auto-kudzima sirinji
Inodzoreredza Auto-Regedza Syringe chinhu chakakura ndeyekuti jekiseni rejekiseni rinodhonzwa rakadzoserwa mumuhara kudzivirira njodzi yezvimiti zvetsono. Iyo yakasarudzika dhizaini dhizaini inogonesa iyo conical chinongedzo kutyaira jekiseni retsono gungano kuti ridzokere zvachose mumuhara, zvichinyatso kudzivirira njodzi yetsono tsvimbo yevashandi vekurapa.
1. Yakatsiga chigadzirwa mhando, izere otomatiki kugadzirwa kudzora.
2.Rabha yekumira inogadzirwa neakasikwa rabha, uye iyo yepakati tsvimbo inogadzirwa nePP kuchengetedza zvinhu.
3. Kuzadza kwakatemwa kunogona kusangana nezvose zvinodiwa zvejekiseni rekurapwa.
4. Govera zvakapfava mapepa-epurasitiki kurongedza, nharaunda-inoshamwaridza zvinhu, zviri nyore kuburitsa.